2014-06-01 ~ မောင်လေ့လာ | Free Download Software Full Version
IN Photo and Media Editor Tools - ON Saturday, June 07, 20142comments
Corel VideoStudio Pro X7 v17.1.0.22 Multilingual (x86/x64) | 1.78 GB / 1.76 GB
Corel VideoStudio Pro X7 ဒါကတော့ Video Editing သမားတွေအကြိုက်တွေ့ရတဲ့ နာမည်ကြီး Software ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန် Video ကြည့်နေရင်း စိတ်ကြိုက် Editing လုပ်နိုင်သလို User Friendly ဖြစ်တဲ့အပြင်အဆင်နဲ့ Editing Tools တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။လိုအပ်ရင်တော့ဒေါင်းသွားလိုက်ပါ
Download from Tusfiles.net:
Corel VideoStudio Pro X7 v17.1.0.22 x86.part1.rar
Corel VideoStudio Pro X7 v17.1.0.22 x86.part2.rar
Corel VideoStudio Pro X7 v17.1.0.22 x86.part3.rar
Corel VideoStudio Pro X7 v17.1.0.22 x86.x64.part1.rar
Corel VideoStudio Pro X7 v17.1.0.22 x86.x64.part2.rar
Corel VideoStudio Pro X7 v17.1.0.22 x86.x64.part3.rar
Download from Usersfiles.com:
Battery Doctor (Battery Saver) v4.9.2 ( for Android )
IN Android Application - ON Friday, June 06, 2014 No comments
Battery Doctor (Battery Saver) v4.9.2 | 4.4 MB
Android ဖုန်းတွေအတွက် ဒီ application လေးက ဖုန်းရဲ့ Battery ကို ချွေတာဖို့ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး Battery သက်တမ်းကိုလဲ ထိန်းထားနိုင်ပါသေးတယ်..Optimize ဆိုတဲ့ သစ်ရွက်စိမ်းလေးကို မကြာမ
ကြာနှိပ်ပေးခြင်းဖြင့်လည်း Battery စားနေတဲ့ Application တွေကို ရပ်တန့်ပစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ Long,
General,Sleep နှင့် မိမိ စိတ်ကြိုက် mode လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ Battery ရဲ့ရောဂါတွေကို ကုသပေးမဲ့ Battery Doctor (Battery Saver)update လေးပါ.. မိမိ ဖုန်းထဲမှာ ရှိပီးသားဆိုရင် ယခု update လုပ်
ဖို့တင်ပေး လိုက်ပါတယ်နော်.အောက်မှာဒေါင်းယူပီး update လုပ်လိုက်ပါခင်ဗျာ..
Advanced Task Manager Pro v5.0.2 APK |2MB
Android ဖုန်းတွေမှာ battery အားအကုန်မြန်တာ တွေကိုလျော့ချ ၊
မိမိ အသုံးမပြု့ပဲ background မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ App တွေကို ပိတ်ပစ် လိုက်ပြီးတော့
Android ရဲ့ speed ကို မြှင့်တင်ပေးနိူင်တဲ့ Advanced Task Manager Pro လေး
အသစ် Update ထွက်လာလို့ သုံးစွဲနေကြ သူငယ်ချင်းတို့အတွက်
Photo Studio PRO v1.2.2.2 APK | 15.3 MB
Photo ​တွေကို အ​ကောင်းဆုံး စိတ်​ကြိုက်​ ပြုပြင်​ဖန်​တီး​ပေးနိုင်​တဲ့ Photo Studio PRO v1.2.2.2 ဆိုတဲ့ ​နောက်​ဆုံးထွက်​ Version ​လေး တင်​​ပေးလိုက်​ပါပြီကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်ကြနော်ဘယ်လို
လမ်းလဲဆိုတာ Android os 2.2 အထက်ကိုကောင်းကောင်းလေးသုံးနိုင်ပါ
What's in this version: (Updated : Jun 4, 2014)
IN Internet Tools - ON Thursday, June 05, 2014 No comments
ကိုလှမ်းသုံးနိုင်ပါတယ်..ဒါဆိုရင်သဘောပေါက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်TeamViewer Enterprise ဗားရှင်းသစ် 9.0.29272 ထွက်လာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.ကဲ..စမ်းသပ်အသုံးပြုလိုသူများ
IN Android Application - ON Thursday, June 05, 2014 No comments
Sleep as Android FULL v20140603 | 8 MB
ဒီကောင်လေးကညဖက်မှာ(FaceBook, Twitter) သုံးရင်းနဲ့ အိပ်ပျော်သွားတတ်တဲ့ဘော်ဒါတွေ
အတွက်ဖုန်းကအင်တာနက်ကို auto ပိတ်ပေးမဲ့ app လေးပါ။သုံးပုံသုံးနည်းကတော့အဲ့ app လေး
ကိုကလစ်ရင်းနဲ့enable/disable လုပ်ပီးအဆင်ပြေစွာသုံးနိုင်ပါတယ်..လိုအပ်ရင်တော့အောက်မှာ
- NEW! Philips HUE smartlight integration
- NEW! Pebble smart watch wrist-tracking
Note: All full features available. No key need. Remove previous version before install.